တရုတ် Xinle Hongtai waterproof - တရုတ်ကတ္တရာစေးရေစိုခံအမြှေးပါးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပြုပြင်ထားသော
SBS ရဲ့ကတ္တရာစေးမြှေးပါး ...
လူမီနီယမ် coated ...
ပေရုပ်ရှင် coated လူမီနီယမ်
တရုတ်ရေစိုခံအမြှေးပါး productio ကတ္တရာစေးပြုပြင်ထားသော ...
Roa သည်ကတ္တရာသုံးတာ APP ကိုရေစိုခံအမြှေးပါးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် ...
ကိုယ်ပိုင်ကော် Bituminous ရေစိုခံအမြှေးပါး / fla ...
မူလအစရာ: Hebei, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: SBS / APP ကိုကတ္တရာရေစိုခံအမြှေးပါး
ဗို့: 380v / 50HZ
စွမ်းဆောင်ရည်: 3000-15000square မီတာ / နေ့
အာမခံ: 12 လ
ပင်မအလုပ်ရုံ: 90m * 12M * 8 မီလီယံ
compressed လေကြောင်း: 0.7Mpa, 0.6M3 / မိနစ်
Inforcement: polyester သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာမှန်
ပြုပြင်ထားသောကတ္တရာစေးရေစိုခံအမြှေးပါးကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်ခေါင်မိုး, မြေအောက်ခန်း, အိမ်သာ, တံတား, ပန်းခြံ, ရေကူးကန်, ရေစိုခံခြင်းနှင့် moistureprof များအတွက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်စက်မှုဇုန်နှင့်အရပ်ဘက်အဆောက်အဦးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကတ္တရာစေးနေတဲ့ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဖြစ်ပြီးရေနံစိမ်းကနေသဘာဝကိုဖန်တီးသည်။ ဒါဟာအသုံးဝင်သောကာဗွန်စတိုးဆိုင်သည်နှင့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ဖို့မထားဘူး။ အဆိုပါအမြှေးပါးထို့ကြောင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကာဗွန်သိုလှောင်တဲ့ရေရှည်တည်တံ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မြေတပြင်လုံးအလုပ်လုပ်နိယာမ3ခြေလှမ်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
1. သဖြင့်ချောအရောနှော bituminous ရောနှောဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ် (အရောစပ်အကြံပေးအဖွဲ့ conduction ရေနံအားဖြင့်နွေးထားသင့်တယ်) တင့်ကားဖော်စပ်မှတဆင့်ကတ္တရာစေး, ရော်ဘာအမှုန့်, talcum အမှုန့်, enginee ရေနံနှင့်အချို့သောအခြားကုန်ကြမ်းရောမွှေပါ။
2. ခြေရင်းပစ္စည်း (အားဖြည့်) နောက်ဆုံးကတော့ bituminous mixtures.At နှင့်အတူ coated ပါလိမ့်မည် pools.Then အဆိုပါ bituminous ရောနှောအပေါ်ယံပိုင်းသို့ deliveryed ပါလိမ့်မည်, ထိုအင်္ကျီကိုအားဖြည့် PE ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်သဲသို့မဟုတ်အခြား materials.At အားဖြင့်ထိုကာလဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်, အ ကတ္တရာစေးဖွဲ့စည်းပဏာမ membrane ။
3. အဆိုပါချောထုတ်ကုန် autowinder အားဖြင့်လှိမ့်ခံရပြီးတော့, ရေနှင့်လေယာဉ်ဖြင့်အအေးလိမ့်မည်။
မာခ်က ISO 12100-2010
shipping: Tianjin port ကို
အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ဘဝ 15 နှစ်ကျော်ပြီးအာမခံ 1 နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်: မြို့ရိုးကိုရေစိုခံဘို့ self-ကော်ကတ္တရာရေစိုခံစာရွက်ပစ္စည်း
SBS ရဲ့ Bituminous တံတား waterproof ပြင်ဆင်ထားသော
3mm 4mm App ကိုကတ္တရာသုံးရေစိုခံစာရွက်ကုန်ကြမ်း ...
ပြုပြင်ထားသော Bituminous ရေစိုခံစာရွက်ကုန်ကြမ်း ...
အလိုအလျောက်လိပ် Waterpro အောင်များအတွက်စက်ခံစားရတယ် ...
3mm 4mm ကတ္တရာစေးရေစိုခံအမြှေးပါးစက်လိုလားသူ ...
3mm 4mm ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်ပူရောင်းချ Self-adhesi ...
စက်ရုံရောင်းချအပူခံနိုင်ရည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် granules ...
နေရပ်လိပ်စာ: Hebei shijiazhuangshixinleshiduguzhendugucun shangmaojie
E-mail ကို: hongtaijx88@126.com